Maxkamada Gobolka Bari oo xukuntay rag ku eedeysan Burcad badeednimo – SBC
Maxkamada Gobolka Bari oo xukuntay rag ku eedeysan Burcad badeednimo
Maxkamada darajada 1aad ee gobolka bari ayaa maanta xukunno ku riday ku rag ku eedeysan fal burcad badeed nimo kuwaas oo dhowaan laga soo qabtay deegaano ka agdhow degmada Garacad ee Gobolka Mudug.
Ragan ayaa waxay ka mid ahaayeen Burcad badeed dhowan laga soo furtay Markan iyo shaqaalihii saarnaa oo ay ku heysteen deegaan lagu magacaabo gaarcad oo ku yaala duleedka Degmada garacad waxaana ay dhanmaayeen 3 qof .
GUdoomiyaha Maxkamada Darajada 1aad ee Gobolka Bari Sh Aadan Aw Axmed ayaa ku dhawaaqay xukunada ay muteysteen ragani iyo rag kale oo ka maqnaa maxkamada
Waxa uu sheegay Gudoomiyuhu in Maxkamadu ku xukuntay 2nin oo ka mid ah 3da nin ee la hayo min 10sano iyo lacag dhan 50milyen oo Shilin Soomaali ah, halkak ninka kale ee ka mid ka ah 3da nine e Maxkamada la horkeenay ay ku xukuntay 3sano oo xarig ah iyo 50 milyen oo ganaax ah, .
Waxaa kale oo ay maxkamadu ku xukuntay min 10sano iyo 50milyen oo Soomaali ah 12 nin oo ka mid ahaa burcadbaadeeda kuwaas oo aan gacan lagu heyn iminka xukunkana uu uga bilaaban doono marka gacanta lagu soo dhigo.
Gudoomiye Sheekh Aadan Aw Axmed waxaa kale oo uu sheegay in maxkamadu xukuntay hub laga soo qabtay ragan iyo kuwa kaleba waxana ku xukuntay in dowladu ay la wareegto.
Sikastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd Markii ciidamada Badda Puntland ay soo furteen ku dhowaad 22 shaqaale Anaajiib ah iyo Markabkii ay ku afduubnaayeen oo lagu magacaabo Mv Icebrek.